ကမ္ဘာ့ဈေးအကြီးဆုံး Bugatti La Voiture Noire စူပါကား ဝယ်လိုက်တဲ့ ရော်နယ်ဒို - The Lifestyle Myanmar
Home Entertainment ကမ္ဘာ့ဈေးအကြီးဆုံး Bugatti La Voiture Noire စူပါကားကို ဝယ်ယူလိုက်တဲ့ ခရစ္စတီယာနို ရော်နယ်လ်ဒို
တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာတစ်စီးတည်းသာရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားခြင်းခံရတဲ့ ဘူဂတ်တီ La Voiture Noire စူပါကားရဲ့ ပိုင်ရှင်က ပေါ်တူဂီဘောလုံးအကျော်အမော် ခရစ္စတီယာနို ရော်နယ်ဒို (Christiano Ronaldo) ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းက လက်ရှိမှာ အတော်လေးကို ပျံ့နှံ့လို့နေပါတယ်။
ဒီလိုသတင်းတွေ ပျံနှံ့နေရတဲ့အကြောင်းကတော့ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာတစ်စီးတည်းသာရှိပြီး ၂၀၁၉ ဂျီနီဗာကားပြပွဲမှာ ပထမဦးဆုံးမိတ်ဆက်ပြသခဲ့တဲ့ ဘူဂတ်တီ La Voiture Noire ကားသစ်ကို ရော်နယ်ဒိုက ပေါင် (၉. ၄၉) သန်းနဲ့ ဝယ်ယူထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ သတင်းဌာနတချို့က အခိုင်အမာကို ဖော်ပြနေကြလို့ပါ။
ပြင်သစ်ဇိမ်ခံကားကုမ္ပဏီ ဘူဂတ်တီဟာ ကုမ္ပဏီတည်ထောင်သက် နှစ် (၁၁၀) ပြည့်မြောက်တဲ့အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ ဒီကားကို တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ တစ်စင်းတည်းပဲ ကန့်သတ် ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီး ၂၀၁၉ မတ်လအတွင်းကကျင်းပတဲ့ ဂျီနီဗာကားပြပွဲမှာ ကမ္ဘာ့ဈေးအကြီးဆုံးကားဖြစ်ခဲ့တဲ့ La Voiture Noire ကားဟာ အခုအချိန်မှာတော့ ရော်နယ်ဒိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ အဖိုးတန်ကားစာရင်းထဲကို ရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီ။
ကနဦးသတင်းတွေမှာတုန်းက ဒီကားကိုဝယ်ယူခဲ့သူဟာ ဗောက်စ်ဝက်ဂွန်ကားကုမ္ပဏီရဲ့ဥက္ကဌဟောင်း ဖာဒီနန် ပီးခ်ျ ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ကြပေမဲ့ အခုလက်ရှိမှာတော့ ပေါ်တူဂီဘောလုံးအကျော်အမော်ကသာ အမှန်တကယ်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ စပိန်သတင်းစာတွေက အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြနေကြပြန်ပါတယ်။
မီလျံနာအားကစားသမားတွေစာရင်းမှာပါဝင်သူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ရော်နယ်ဒိုဟာ ဒီလိုမျိုးအဖိုးတန်ဇိမ်ခံကားတွေ၊ ပြိုင်ကားတွေကို ဈေးကြီးပေးဝယ်ယူစုဆောင်းလေ့ရှိသူဖြစ်တာကြောင့် ဒီကားကို သူဝယ်လိုက်တယ်ဆိုတာဟာ အတော်လေးဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့သတင်းလို့ ယူဆလို့ရနေပါတယ်။
ဘူဂတ်တီ La Voiture Noire ကားကို ၁၉၃၆ နဲ့ ၁၉၃၈ အကြားကာလမှာထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ ဂန္တဝင် 57 C Atlantic ဘူဂတ်တီကားဒီဇိုင်းအပေါ်အခြေခံပြီး အဆင့်မြှင့်မွမ်းမံဖန်တီးထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ကာ (၈. ဝ) လီတာ W16 တာဘိုအင်ဂျင်ကိုတပ်ဆင်ပေးထားတာကြောင့် တစ်နာရီကို မိုင် (၂၆၀) နှုန်းထိမောင်းနှင်နိုင်တဲ့အတွက် ပြိုင်စံရှားစူပါကားတစ်စီးလို့သတ်မှတ်ခြင်းခံထားရပါတယ်။
တဈကမ်ဘာလုံးမှာတဈစီးတညျးသာရှိတယျလို့ဖျောပွထားခွငျးခံရတဲ့ ဘူဂတျတီ La Voiture Noire စူပါကားရဲ့ ပိုငျရှငျက ပျေါတူဂီဘောလုံးအကြျောအမျော ခရစ်စတီယာနို ရျောနယျဒို (Christiano Ronaldo) ဖွဈတယျဆိုတဲ့ သတငျးက လကျရှိမှာ အတျောလေးကို ပြံ့နှံ့လို့နပေါတယျ။
ဒီလိုသတငျးတှေ ပြံနှံ့နရေတဲ့အကွောငျးကတော့ တဈကမ်ဘာလုံးမှာတဈစီးတညျးသာရှိပွီး ၂၀၁၉ ဂြီနီဗာကားပွပှဲမှာ ပထမဦးဆုံးမိတျဆကျပွသခဲ့တဲ့ ဘူဂတျတီ La Voiture Noire ကားသဈကို ရျောနယျဒိုက ပေါငျ (၉. ၄၉) သနျးနဲ့ ဝယျယူထားပွီးဖွဈတယျလို့ သတငျးဌာနတခြို့က အခိုငျအမာကို ဖျောပွနကွေလို့ပါ။
ပွငျသဈဇိမျခံကားကုမ်ပဏီ ဘူဂတျတီဟာ ကုမ်ပဏီတညျထောငျသကျ နှဈ (၁၁၀) ပွညျ့မွောကျတဲ့အထိမျးအမှတျအနနေဲ့ ဒီကားကို တဈကမ်ဘာလုံးမှာ တဈစငျးတညျးပဲ ကနျ့သတျ ထုတျလုပျထားတာဖွဈပွီး ၂၀၁၉ မတျလအတှငျးကကငျြးပတဲ့ ဂြီနီဗာကားပွပှဲမှာ ကမ်ဘာ့ဈေးအကွီးဆုံးကားဖွဈခဲ့တဲ့ La Voiture Noire ကားဟာ အခုအခြိနျမှာတော့ ရျောနယျဒိုပိုငျဆိုငျတဲ့ အဖိုးတနျကားစာရငျးထဲကို ရောကျရှိလာခဲ့ပါပွီ။
ကနဦးသတငျးတှမှောတုနျးက ဒီကားကိုဝယျယူခဲ့သူဟာ ဗောကျဈဝကျဂှနျကားကုမ်ပဏီရဲ့ဥက်ကဌဟောငျး ဖာဒီနနျ ပီးချြ ဖွဈကွောငျးဖျောပွခဲ့ကွပမေဲ့ အခုလကျရှိမှာတော့ ပျေါတူဂီဘောလုံးအကြျောအမျောကသာ အမှနျတကယျဝယျယူပိုငျဆိုငျထားခဲ့သူဖွဈတယျလို့ စပိနျသတငျးစာတှကေ အကယျြတဝငျ့ ဖျောပွနကွေပွနျပါတယျ။
မီလြံနာအားကစားသမားတှစောရငျးမှာပါဝငျသူတဈဦးဖွဈတဲ့ ရျောနယျဒိုဟာ ဒီလိုမြိုးအဖိုးတနျဇိမျခံကားတှေ၊ ပွိုငျကားတှကေို ဈေးကွီးပေးဝယျယူစုဆောငျးလရှေိ့သူဖွဈတာကွောငျ့ ဒီကားကို သူဝယျလိုကျတယျဆိုတာဟာ အတျောလေးဖွဈနိုငျခရြှေိတဲ့သတငျးလို့ ယူဆလို့ရနပေါတယျ။
ဘူဂတျတီ La Voiture Noire ကားကို ၁၉၃၆ နဲ့ ၁၉၃၈ အကွားကာလမှာထုတျလုပျခဲ့တဲ့ ဂန်တဝငျ 57 C Atlantic ဘူဂတျတီကားဒီဇိုငျးအပျေါအခွခေံပွီး အဆငျ့မွှငျ့မှမျးမံဖနျတီးထုတျလုပျထားတာဖွဈကာ (၈. ဝ) လီတာ W16 တာဘိုအငျဂငျြကိုတပျဆငျပေးထားတာကွောငျ့ တဈနာရီကို မိုငျ (၂၆၀) နှုနျးထိမောငျးနှငျနိုငျတဲ့အတှကျ ပွိုငျစံရှားစူပါကားတဈစီးလို့သတျမှတျခွငျးခံထားရပါတယျ။
Ref: “Ronaldo ‘buys world’s most expensive car’ –a£9.5million one-off Bugatti La Voiture Noire”
Previous articleပရီးမီးယားလိဂ် ထိပ်သီး၆သင်းနဲ့ပွဲတွေမှာ ဟယ်ရီကိန်းနဲ့ ရွန်းနီတို့ထက် ဂိုးပိုသွင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ မက်ဆီ
Next articleဘောလုံးကစားခြင်းကနေ အနားပေးခံရတော့မယ့် ကာဆီးလက်စ်
နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ ဂပြနျနိုငျငံသို့ တရားဝငျခရီး သှားရောကျမညျ